Amakhambi omphakathi wesikhumba esiqinisa
Ukugcina impilo enempilo, ukunakekelwa kwesikhumba sakho nsuku zonke - konke lokhu kukuvumela ukuba ugcine ubusha nobuhle isikhathi eside. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi kukhona isikhathi lapho isikhumba sidinga ukunakekelwa okukhethekile, ngaphandle kwalokho sizolahlekelwa ubushelelezi nokuqina kwawo. Isikhumba siqala ukuphela, ukubola, imibimbi kanye nemibimbi kuvela. Emadolobheni amakhulu anezinto eziphilayo ezimbi nezingozi, isikhumba siphuthuma ngokushesha kunamadolobhana ahlanzekile, athule, futhi leli qiniso kumelwe libhekwe. Kodwa kungenzeka yini ukubambezela ukuguga kwesikhumba ngenkathi kulondolozwa ukubukeka kwawo okusha futhi okunempilo, nomthelela wansuku zonke kwezici eziningi ezinonya? Abesifazane abaningi bakholelwa ukuthi lokhu kungafinyelelwa kuphela ngosizo lwe-brace, elisetshenziswe izinkanyezi zebhizinisi lokubonisa ne-cinema.
Kumele ngithi akubona bonke abonisa izinkanyezi zebhizinisi noma i-cinema resort kule ndlela. Bayaqonda ukuthi into ebaluleke kunazo zonke ingempilo, futhi ngokuvamile bayathanda ukumisa massage, izindlela zokwenza izimonyo eziphumelelayo noma i-cosmetology ye-hardware. Amandla wezinkanyezi aqapha ngokucophelela kunalokho ongakucabanga.
Lapha sizozama ukukutshela indlela ongayenza ngayo ubuso bakho ngaphandle kokuhlinzwa, nokuthi ungayinakekela kanjani ekhaya ngaphandle kwama-beauty salons abizayo.
Isimo esisodwa esidingekayo singukujwayelekile, ngaphandle kwalokho akukhozinqubo zekhaya ngeke zisebenze. Uma ungenayo isikhathi esanele samahhala, awudingi ngisho nokuqala, ngoba umphumela uzoba wesikhashana futhi uzoletha ukudumala kuphela.
Ukuphakama ekhaya akukwazi ngaso sonke isikhathi ukusiza: uma unemibimbi ebusweni obujulile noma ugoqa esikhumbeni, kungcono ukuxhumana nomtholampilo noma i-salon. Kodwa ukuze uthuthukise ithoni bese ubuyisela ukuqina kwesikhumba sobuso, susa imincintiswano encane futhi ulungise ukuchithwa kwe-oval ebusweni kungenziwa ekhaya.
Kusho ukuqinisa isikhumba, kuphekwe ekhaya
Ngaphezu kwe-serums ehlukahlukene, i-helium, i-creams, i-lotions kanye ne-tonic, ubuso obuso bomzimba nobuso bentamo, okuhlanza futhi okunomsoco, kubhekwa njengendlela ephumelelayo. Amaski amahle kakhulu, ahlanganisa nodaka lwezokwelapha. Ama-masks anjalo athuthukisa ukujikeleza kwegazi kanye nezinqubo ze-metabolic, futhi nabo, banikela ekwenzeni ukuvuselelwa kwamaseli ngokwabo kanye nokuhlanza isikhumba. Ama-Masks anconywa ukuba kwenziwe kaningi izikhathi ezimbili ngesonto, ukuze uthole umphumela ozinzile.
Isenzo samaski siqinisa ukuzithokozisa kobuso. Ngemuva kwalo, isikhumba sizobamba kangcono izinto ezidingekayo, sisebenzise ngokwengeziwe izinhlayiya eziyingozi, futhi, ngaphezu kwalokho, ithoni yemisipha izoba ngcono, amangqamuzana afile ebusweni azoyeka ngokushesha futhi ahlinzeke ngamaseli amasha. Ukuphazamisa imibimbi emincane, ukuvuza, ukuvuvukala, isikhumba sizobukeka sisanda futhi sisencane.
Ukuphunga kufanele kwenziwe kabili noma kathathu ngeviki, kanye namaski, izandla nobuso ngenkathi behlanzekile. Unganika izivivinyo ezimbalwa ezilula, okumele kwenziwe ngazo izikhathi ezingu-6 kuya kwezi-7:
iminwe emibili idinga ukuthungula isikhumba ngobumnene emathunjini;
futhi ubushelela isikhumba ebunzini kusukela emaceleni kuya ezinyaweni, okungukuthi, kusukela phansi phansi;
kusukela enkabeni yechungechunge, ngasekugcineni kwe-earlobe nayo yonke iminwe ukushelela isikhumba samathunga;
ngemuva kwesandla ukusilisa kancane indawo ye-submandibular.
Amasks adingekayo ukuqinisa isikhumba sobuso
Ngezinye izikhathi izikhambi zabantu ziphumelela kakhulu kunezimonyo eziningi zanamuhla zenani elikhulu. Uma izindlela zokwelapha zijwayele ukuhlanganiswa nokuhlunga, izinqubo zamanzi, izivivinyo ezihlukahlukene kanye nokudla okunempilo, umphumela uzosebenza kangcono. Abanikezi umphumela osheshayo, kodwa zithandekayo futhi ziwusizo esikhumbeni. Kungcono ukuthatha imaski yasekhaya ngemuva kokubuthwa, ukhetha konke okuthandayo.
I-mask namafutha omnqumo isusa isikhumba somzimba kahle. Amafutha omnqumo (isipuni esisodwa) ixubene nejusi likalamula (amaconsi ayisithupha) kanye neyayikhupha elilodwa leqanda. Bese ufake imizuzu engamashumi amabili ebusweni, bese ugeza ngamanzi.
I-Butter isebenza kahle. Ukuze wenze lokhu, kufanele uxube ne-camphor utshwala. Kufanele ugaye ngokucophelela amagremu angama-50 ebhotela nge-2 izikhupha bese kancane kancane wengeze amafutha omquba (amathisipuni amathathu), ukumnika ama-chamomile (ingxenye yesigila seglasi), i-glycerin (isigamu sesipuni). Ekugcineni, engeza i-camphor utshwala (amagremu angamashumi amathathu), konke kuxutshwe kahle futhi ukhilimu usetshenziswa ebusweni cishe imizuzu engamashumi amabili. Khona-ke kubalulekile ukugeza ngamanzi. Gcina le ukhilimu esiqandisini izinsuku ezimbalwa bese uyisebenzisa izikhathi ezingu-2-3.
Umasikisi wefulawa wekolweni uqinisa isikhumba futhi uyondle. Iqanda kufanele lishaywe kuze kube yilapho isikhumba sikhiwa, engeza usawoti (ithisipuni eyodwa) namafutha yemifino (amagremu amahlanu). Ufulawa wokhula (amagremu angamashumi amabili nanhlanu) uthele amanzi (i-litre ilitha) bese upheka ngokwehlukana kuze kube yilapho uqina. Thela ingilazi yamanzi abandayo ibe yikhulu elilungiselelwe ukuze ifilimu ifane phezulu lapho ipholile. Bese usula amanzi, engeza inhlanganisela yeqanda ne-bhotela bese ushaya kahle kuze kufike ukhilimu. Kamuva ungakwazi ukwengeza amanzi. Kusukela engxenyeni elandelwayo yenza imaski imizuzu engu-20-30.
Phindela emuva isikhumba ebusheni nasekuseni emasikini asekelwe amajikijolo amasha: ama-strawberry, ama-raspberries, ama-cowberries, i-mountain ash kanye nabanye.
Ukuhlanzwa okuhlukile kokukhanda kwesikhumba
Ukuxubha okuhlukile noma ukugeza ngeqhwa kukuvumela ukuthi uhukhule isikhumba sakho ebusweni ekhaya.
Kulezi zinhloso, kungcono ukusebenzisa ama-frozen afriziwe kusuka emifino: mix mix marigold (amabili wezipuni) ngesilinganiso esifanayo sika-parsley bese wengeza wonke amanzi abilayo (400 milliliters), kodwa izitsha ezahlukene. Ngemuva kwemizuzu engamashumi amane, uthele isikhunta bese ufaka efrijini. Njalo ekuseni, usule kuqala ama-cubes abantu kusukela ekungeneni kwe-calendula, bese kuba i-cube yeqhwa kusukela ekungeneni kwe-parsley.
Ngaphezu kwalokho, ungenza ukucindezela okungafaniyo, ngenkathi ungasebenzisi amanzi, kodwa izihlahla ezinamakhemikhali ahlukahlukene (chamomile, umhlonyane, i-dandelion, njll). Okokuqala, sebenzisa umhluzi oshisayo emaminithini amabili kuya kwemibili, bese umhluzi obandayo ombalwa imizuzwana. Ukuncintisana okunjalo kufanele kushintshwe izikhathi ezingu-5-10, uphinda le nqubo izikhathi ezintathu ngesonto.
Izindlela ezinjalo abesifazane abaye bafunda ukusebenzisa isikhathi eside. Khona-ke kwakungekho ukuhlinza nge-plastic kanye nobuhle be-salon, futhi ubulili obuhle bekwazi ukuhlala buhle kakhulu kuze kube sekudala. Ake futhi thina sonke sihlale sihle, ngoba sinesizathu ngasinye salokhu.
Ukunciphisa i-cholesterol kumakhambi omuntu wegazi
Ukwelashwa kwe-sclerosis ngemithi yomuntu
Ingabe i-sauna iyasetshenziswa isifo sikashukela?
Ama-ovari: Izinkinga eziyinhloko
Indlela yokunciphisa amahloni futhi uyeke ukuxuba
Dysbacteriosis ngesikhathi sokukhulelwa
Crispy amafrimu amaFrench
Izizathu eziyishumi zokufunda Amabhuku ka-Alice Clover
O, lo mshado, umshado, umshado ...
Ukudla okunemibonakaliso yezinkanyezi
Cannelloni nge ushizi kanye utamatisi puree
Amadoda amaningi nowesifazane oyedwa
Iklabishi isobho sokulahlekelwa isisindo
Iminwe yeminwe yokuthuthukiswa kwamakhono amakhono emoto
Imiphumela yombala kwi-psyche
I-Yoga ithuthukisa izinga lokuphila okusondelene
Iklabishi elinesibindi "I-Provansal"
Izinwele zezinwele ezinama-stylish zezinwele ezibukhali
Indlela yokunakekela i-Chinesefishfish
Indlela yokusika i-ananas